विचार / दृष्टिकोण Archives - Page3of 21
फागुन १६, २०७५ बिगुल
अधुरै रहने भयो पिताको जलदानमा भक्तपुर फर्किने बाचा ! परिवारसँगै पूरै टोल शोकमा डुब्यो !
काठमाडौँ- बुधबार दिउँसो ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका १० सिस्नेभीरमा ७ जना सवार हेलिकप्टर दुर्घटना भयो। दुर्घटनामा परी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाले ज्यान गुमाए। त्यहि ७ जना …
भारत–पाकिस्तान विभाजनपछि भएका महत्वपूर्ण घटनाहरु यस्ता छन् !
फागुन १६, २०७५ पत्रपत्रिका
नयाँदिल्ली । सन् १९४७ मा ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएसँगै भारत र पाकिस्तान छुट्टिएर नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र बने । स्थापना कालदेखि नै यी दुई छिमेकी देशबीच कहिल्यैपनि सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन …
फागुन १५, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ- ताप्लेजुङको चुनडाँडामा संभावित विमानस्थलको अनुगमन गर्न पुगेको समयमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी नागरिक उड्यन तथा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी दिवंगत भएपछि देशले एक हुनाहार युवा नेता एवं मन्त्रीलाई गुमाएको छ । …
राजा गए, नेता आए, जनताले के पाए ? समृद्धि कहिले ?
फागुन १४, २०७५ बिगुल
हामी पनि समृद्धिको यात्रामा हुईकिउँ ! विक्रम सम्बत २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जारी भयो । यो नेपाली इतिहासको सातौँ संविधान भएपनि …
कस्मिर भारतको कि पाकिस्तानको ? कस्मिर भारतमा यसरी बिलय भएको रहेछ !
बिबिसी । भारतको सर्वोच्च अदालतमा यसै साता संविधानको अनुच्छेद ‘३५–ए’ संशोधन हुनु पर्छ भनी दिएको फिरादमा सुनुवाइ हुन सक्छ । भनिन्छ, ‘भारत प्रशासित कस्मिरको पुलवा जिल्लामा अर्धसैनिक बलको ताँतीमा आक्रमण हुँदा …
“प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईले मलाई शिर झुकाउन बाध्य बनाउनु भो” [प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र]
फागुन १०, २०७५ बिगुल
सम्माननिय प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओलि ज्यू, म गोदावरी न पा १० चापागाउ ललितपुर मा २०३० साल देखि बसोबास गर्दै आएको छु । कामको सिलसिलामा दैनिक चापागाउ बाट जावलाखेल आवत …
फागुन ०१, २०७५ BNNTV
सुनिता कंडेल गुल्मी १ फागुन । प्रेम धर्म,शक्ति र शान्ती हो । हरेक मानव हृदयमा प्रेम हुन्छ । प्रेम मानव जिबनमा हुने स्वचालित प्रकृया हो । प्रेमले सबैलाई मिलाउछ सबैलाई …
फागुन ०१, २०७५ बिगुल
उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो भनाइ हतियार कारोबारका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । कुनै काम गर्नुपर्‍यो भने त्यसको सफलता वा असफलता मानिसको इच्छाशक्तिमा …
मे २०१८ मा राष्ट्रपतीय निर्वाचन भयो । यो चुनावका वेला लोकप्रिय विपक्षी नेताहरू कि जेलमा थिए कि निर्वासन वा उनीहरूलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । विपक्षीलाई सहभागी हुनै नसकिने …
५ सेकेन्ड अगाडि बिगुल